Home MAAMULKA FOOTBALL Chris Wilder Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada buuxda ee loo yaqaan 'Genius Football' oo leh naaneyska "Maamulaha Dugsiga Hore". Sheekadeena Chris Wilder Childhood Story Plus Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo Kacitaanka Chris Wilder. Dhibcaha Sawirka: LastSticker iyo Twitter.
Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisii ​​hore / asalka qoyskiisa, waxbarashadiisa / mustaqbalkiisa shaqo, noloshiisii ​​hore ee xirfadda, jidkii caannimada, kacitaanka sheeko caan ah, nolosha xiriirka, nolosha shaqsiyan, xaqiiqooyinka qoyskiisa, qaab nololeedkiisa iyo xaqiiqooyinka kale ee aad looga yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu yahay maamule loo yaqaan 'Dinosaur'Qaabka loo maareeyo maamulka kubada cagta, mid mucjiso sameeyay isagoo kooxdiisii ​​Sheffield ka dhigay (oo qiimihiisu ka yar yahay £ 1m) bilow bilow fiican ah xilligii Horyaalka heerka koowaad ee 2019 / 2020. Si kastaba ha noqotee, kaliya tiro yar oo ka mid ah taageerayaasha kubada cagta ayaa tixgeliya qaabkeena Chris Wilder's Biography oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Chris Wilder Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Asalka Qoyska iyo Nolosha Hore
Christopher John Wilder wuxuu ku dhashay maalinta 23aad ee Sebtember 1967 ee Stocksbridge, magaalo yar iyo kaniisad madani ah oo ku taal Magaalada Sheffield, England. In kasta oo uu ku dhashay Sheffield, maamulaha kubada cagta ee qowmiyada cad ee Ingiriiska ayaa qoyskiisu asal ahaan ka soo jeedaan magaalada Steel ee Liverpool, taasoo la micno ah inuu yahayScouser'.
Wilder wuxuu ku barbaaray waalidkiis, walaalaha iyo tan ugu muhiimsan, adeeradiisa oo saameyn weyn ku yeeshay barbaarintiisa. Wuxuu ka soo jeedaa qoys dabaqadda dhexe ah ee uu maamulo aabihiis oo ku noolaa aagga shaqada-Liverpool. Markii uu yaraa, adeeradii Wilder waxay saameyn weyn ku yeesheen isaga oo jecel ciyaarta. Aabaha uu adeerka u yahay kaliya ma barin isaga sida loo ciyaaro kubada cagta, laakiin waxay sidoo kale u kaxeeyeen Anfield si uu u daawado ciyaaraha Liverpool. Erayadiisa;
“Waxaan dhaafi jirnay kirismaska ​​iyo fasaxa iskuulka. Waqtigaas waa markii aan aadi lahaa Anfield ehelkeyga oo ku noolaa xaafad hodan ah, bariga Liverpool. Waan arki lahaa iyaga oo ay ku jiraan aabahay marwalbo kubada cagta ”
Chris Wilder Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Bartamihii Toddobaadkii, Liverpool waxay heshay guulo aad u badan, kuna guuleysatay wax walba- Koobabka Yurub, UEFA Champions League, League Cup, European Super Cup / UEFA Super Cup iwm. Chris Wilder wuxuu ku sugnaa Anfield si uu u daaqo qaar ka mid waqtiyadaas aabihiis iyo adeerkiis, horumarin u aragtay inuusan dooneynin wax kale oo aan ahayn inuu kubadsameeyo.
Intii uu ku jiray dugsiga, Wilder wuxuu ku riyaaqay dhammaan cayaaraha, gaar ahaan kiristanka. In kasta oo uu ahaa gooldhaliyaha guud, kubadsameeyaha wali waa mudnaanta. Si uu u daba galo riyadiisa Chris Wilder ayaa ka tagay Liverpool kuna sii jeeday halka uu ku dhashay ee Sheffield isagoo raadinaya fursado kubadeed. Wuxuu ka shaqeystay kubbadda cagta isagoo u ciyaaraya Stocksbridge Park Steels FC oo ku yaal degmada Stocksbridge illaa Sheffield.
Waqti ka dib, Wilder wuxuu tijaabo guul leh la qaatay Southampton isagoo ah xirfad barasho kubada cagta ah iyo ciyaaryahan akadeemiyadeed. Isaga oo ah xirfad hoose, wuxuu qaatay doorkiisa nadiifinta kabaha kubada cagta ee halyeeyga Southampton- David Armstrong. In kasta oo uu bixiyay wixii ugu fiicnaa, Wilder miskiin ah kama uusan horumarin karin heerka kooxeed ee kooxda ilaa kubbadda cagta. Nasiib darrose, waxaa loo siidaayay qaab ciyaareedkiisii ​​liitay isaga oo aan ku biirin kooxda koowaad ee Southampton.
Chris Wilder Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Xirfadaha Kubadda Cagta ee Kooban
Ciyaartoy kasta oo dhalinyaro ah oo soo noolaa Diidmada akadeemiyada kaliya ayaa si fiican u ogaan doona xanuunka qiirada leh iyo waxyeelada maskaxeed ee uu yeelan karo. Ka dib markii uu ku guuldareystay inuu sameeyo darajada isagoo ah akadeemiga akadeemiga ee Southampton, Wilder saboolka ah wuxuu ku laabtay Sheffield, magaaladiisii ​​uu ku dhashay. Nasiib wanaagse, Sheffield United waxay u aqbashay inuu yahay difaac.
In kasta oo uu ahaa ciyaaryahan celcelis ahaan ah, Sheffield wuxuu ka caawiyay Wilder inuu sameeyo mustaqbalkiisa ciyaareed. Wiilkii hore ee kubbadda cagtu marna ma uusan saadaalin naftiisa kooxda koowaad ee bisha Agoosto 1986. Intii lagu guda jiray waayihiisii ​​Sheffield, Wilder wuxuu is-hoosaysiiyay amaah isagoo wada aadaya naadiyo 11 ah ka hor inta uusan ku biirin Halifax Town ee 1999, kooxdaas oo ugu dambeyntii kor u qaadday kabihiisa. Wilder (sawirka hoose) ka fariistay kubada cagta markii uu ahaa da'da 34.
Chris Wilder wuxuu ka fariistay kubada cagta isagoo jira 34. Astaanta Sawirka: BT
Chris Wilder Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Waddada loogu talagalay sheekada
Chris Wilder markii uu howlgab noqday wuxuu bilaabay inuu u dhaqaaqo maamulka kubada cagta isagoo aaminsan inuu waxbadan qaban doono inkastoo uu yahay celcelis ahaan kubada cagta. Wuxuu xirfadiisa tababarka ku bilaabay Alfreton Town sanadkii 2001. Maamulka kubada cagta sida uu filayay wuxuu ku bilaabay si wanaagsan. Ma ogeyd?… Toddobaadyo 27 uun kadib markii uu ahaa madaxa Alfreton, ninka Ingriiska wuxuu ku guuleystay afar koob.
Qaadashada wejiga xiga ee xirfadiisa maamul, Wilder wuxuu sii waday inuu maamulo Halifax in kabadan ciyaaraha 300 ilaa naadigu u wareego 30 June 2008. Ku wareejintii waxay keentay inuu u dhaqaaqo Oxford ka dibna wuxuu u dhaqaaqay, League Two oo ay xafiiltamaan Northampton, halkaas oo uu ku hogaamiyay a League Two cinwaan leh dhibco '99'.
Ma ogeyd?… Chris Wilder intii uu joogay Northampton wax mushaar ah lama hayn muddo seddex bilood ah, horumar horseeday khibrad aad u xun oo ah in kaarkiisa uu dhowr jeer hoos u dhacay isbaarada Supermarket-ka. Isaga liita !!!
Chris Wilder ayaa laga jaray bixinta kaarkiisa markii lagu lahaa mushaarka 3 bilood. Sumcadda Sawirka: hadalka guumayska iyo lacagaha degdegga ah
Chris Wilder Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Kusoo caan bax
Nolosha Chris Wilder ee nolosha duufaanta maaliyadeed waxaa badbaadiyay Amiirka Saudi Arabia Prince Abdullah, Milkiilaha Sheffield oo ku casuumay inuu la wareego maamulka kooxda. Markay ahayd 12 May 2016, Wilder wuxuu ku biiray kooxdiisii ​​carruurnimada ee Sheffield United.
Taageero dhaqaale oo yar, Wilder wuxuu sameeyay wax badan oo uu ku iibsaday isagoo adeegsanaya xawilaad lacag la’aan ah. Wuxuu ka dhigay howshiisa ugu horeysa inay noqoto; “Ka dhigista ciyaartoy dareemeysa guriga”. Si loo gaaro tan, maareeyaha aan micnaha lahayn ayaa jebiyey qoraallada adag ee "Ku soo dhowow ShaqadaGaroonka tababarka kooxda. Isaga, waxaa jiray halku dhigyo dhiirrigelin ka fiican oo ciyaartoy loogu talagalay inay gurigooda ku dareemaan.
Chris Wilder markii uu ku biiray Sheffield wuxuu jeexjeexay hal-ku-dhigyo dhiirigelin leh oo lagu qurxinayo goobta tababarka. Astaanta Sawirka: SuFc iyo Twitter
In kasta oo si liidata ay ku bilaabatay xilli ciyaareedkii ugu horreeyay, Wilder wuxuu kooxda ku hagayey in ay noqoto League One Champions League oo hubinaysa dhibcaha 100.rikoor naadi). Guushiisii ​​wuu sii socday ka dib markii uu galay ka qayb galka Horyaalnimada. Horyaalnimada, Wilder wuxuu u horseeday kooxdiisii ​​Sheffield United inay ku guuleysato horyaalkeedii labaad muddo seddex sano ah oo uu joogay kooxda.
Aqoonsiga guulaha uu gaadhay, waxaa la gudoonsiiyey maamulaha LMA ee 2018 / 2019 xilli. Wilder wuu adkaaday Pep Guardiola abaalmarinta xitaa inta uu maamulaha Manchester City dhammeystay seddexleey guri.
Chris Wilder oo haya abaalmarintiisii ​​LMA ee Sanadka- 2018–19. Astaanta Sawirka: DailyMail
Ka dib markii uu keenay magaaladiisa naadiga horyaal Premier League, Wilder wuxuu bilaabay inuu kooxdiisa ka dhiso hareeraha John Lundstram, waana hal jeer ay diidaan Everton iyo halyeeyga kubada cagta ee ka yimid magaaladiisa, Liverpool. Siiyey ciyaartoydii inteeda kale xorriyad ay ku shaqeeyaan waxay aragtay in qof walba uu ku habboon yahay shaxda Blades. Wilder's Sheffield United waqtigii qorista ayaa cadeeyay bulshada kubada cagta inay qaldan tahay ka dib markii ay taageerayaasha qaar ka mid ah taageeraan sidoo kale waa mid aasaasi u ah Premier League.
Sida wakhtigii qorista, Tababaraha Ingariiska ah ee Liverpool waxaa loogu amaanayaa inuu ka mid yahay hal abuurka taatikada ugu horeysa Premier League ka dib Pep Guardiola- oo dhan waxaa mahad leh Blades 'cajiibka ah ee biloowday xilligii 2019 / 2020. Inta soo hartay, sida ay yiraahdeen, hadda waa taariikh
Chris Wilder Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Xiriirka
Chris Wilder waa nin guursaday. Markii hore wuxuu guursaday xaaskiisii ​​hore oo la odhan jiray Rachel Wilder oo labadooduba waxay lahaayeen laba gabdhood oo qurux badan oo ay kala yihiin; Martha Wilder iyo Evie Wilder. Korsashada caruurta inta ninkeedu sii waday meheraddiisa tababarka, Rachel Wilder waxay maamushay dukaan dharka lagu iibiyo ee Gap ee Manchester iyo Sheffield.
Sida ay sheegayaan wararka, waxaa la shaaciyay in Chris Wilder xaaskiisii ​​hore (Rachel) aysan jecleyn kubada cagta, mararka qaarna ay la qabsaneyso waxaa lagu daawan karaa dhowr saacadood guriga qoyska. Si kastaba ha noqotee, waxay fiirisaa kaliya marka kooxda ninkeeda ay guuleysato. Waxaa ka mid ah gabdhaha Chris Wilder, waa kaliya Martha oo jecel ciyaaraha. Evie Wilder ayaa galay moodada.
Sanado badan ka dib guurka waalidkood, labadaba Martha iyo Evie waxay bilaabeen inay arkaan markhaatiyaal cilaaqaad u dhexeeya hooyadood iyo aabahood. Waxyaabaha ayaa bilaabay inay kala dhacaan oo si aad ah ayey u qadhaadh tahay in a 'furitaan' Waxaa loo arkay inuu yahay ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee lammaanaha jir.
Chris Wilder wuxuu dhaqaaqay furiinka ka dib. Muddo ka dib, wuxuu la kulmay gabadh la yiraahdo Francesca oo uu ku tilmaamay kulankooda 'jaceylka Aragtida koowaad'. Labadaba Chris iyo Francesca waxay is guursadeen maalinta wareejinta ee 2017 (31st ee Janaayo 2017). Maxay maalin u tahay maareeyaha ciyaaraha inuu guursado !!
Chris Wilder Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Naftaada Shaqsiga
Inaad baratid nolosha shaqsiyeed ee Chris Wilder waxay kaa caawineysaa inaad sawir buuxa ka hesho shakhsiyaddiisa ka baxsan howlaha uu ka wado garoonka kubada cagta.
Bilaabidda, Wilder waa nin daacada ah oo adeegsada qaab xirfad iyo farxad ku dhammeeya si dadka loogu hayo daryeelkiisa. Wuxuu aamminsan yahay xorriyadda badan mana u qaadan doono suurtagal haddii fududeynta loo qaato. Tusaale ahaan, haddii aad sameysay wax isaga ka farxiya, wuxuu ku farxi lahaa inuu kuu sheego inuu faraxsan yahay. Haddii aad sameyso wax aan isaga ka farxin, isla markaaba waa uu kuu soo sheegi doonaa, mararka qaar adiga ayuu kugu soo degi doonaa sida a tan oo lebenkii ah. Isaga oo ka hadlaya shakhsiyaddiisa marka laga hadlayo u dulqaadashada caajisnimada, ayuu mar yidhi.Dalxiisyaashu waxaa loogu talagalay oo keliya maqaayadaha mana aha ciyaartoy ku guuldareysta inay gaaraan hibadooda '.
Jacaylkiisa Beer & Khamriga: Isaga oo ka hadlaya noloshiisa gaarka ah dhinaca bulshada, Chris Wilder ayaa dad badani ku sifeeyeen inuu yahay qof si joogto ah ula fal gala (gaar ahaan) asxaabti hore ee baarka laga cabo halkaasoo uu inta badan ku arko isagoo faataxeeya biirkiisa uu jecel yahay.
Barashada Chris Wilder Nolosha Shakhsiyeed ee ka fog Kubadda Cagta. Dhibcaha Sawirka: izsearch, EveningStandards iyo BT
Ma ogeyd?… Laba gitaar iyo khamri oo ay la socdaan shaqaalihiisa tababarka iyo ciyaartoy da 'ah ayaa had iyo jeer si fiican hoos ugu dhacaya ka dib guulaha waaweyn.
Chris Wilder Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Qoyska
Qoyska Chris Wilder waqtiga wax qorista waxay ku noolyihiin Ecclesall Road, waddo ku taal Sheffield, South Yorkshire, England. Waqtiga qoraalka, wuxuu hubiyay in dhammaan xubnaha qoyska ay sameeyaan dadaallo feejignaan ah oo aysan ku raadsan aqoonsi dowladeed.
Iyagoo ku saleynaya xiriirka qoyskiisa, qoyskiisa oo dhan weynaaday waxay ku raaxeystaan ​​markii kubada cagta ay u geyso Merseyside si ay ula ciyaarto Liverpool ama Everton. Tani waa sababta oo ah maamulaha Sheffield United wuxuu u isticmaalay waqtiyadaas inuu dib ula xiriiro qoyskiisa Liverpool. Xitaa inta ay kooxdiisu ciyaareyso midkoodba Everton ama Liverpool, Wilder wuxuu isleeyahay wuxuu iibsanayaa tigidhada ciyaarta qaar ka mid ah kuwa ka soo horjeedda ee uu ku tilmaamay Qoyska. Sidaa darteed, ka ciyaarista koox qoyskiisa waa shaqsi qoto dheer maxaa yeelay aabihiis wuxuu ka yimid Liverpool iyo inta badan xubnaha qoyskiisa midkood ama taageerayaasha Liverpool ama Everton.
Dhanka kale, taageerayaasha Sheffield ayaa wali ku andacooda Wilder inuu yahay mid iyaga u gaar ah sababtoo ah wuxuu ku koray magaaladooda. Ma ogeyd?… Wilder inta badan waxaa lagu xantaa hadalada 'Isagu waa midkeenna ka mid ah'oo uu ku jecel yahay Bramall Lane. Tani waa sababta oo ah taageerayaasha Sheffield way jecel yihiin isaga waxayna aaminsan yihiin inuu sidoo kale qoys yahay.
Chris Wilder Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - nololeedka
Chris Wilder wuxuu ku nool yahay qaab nololeed is-hoosaysiin inkasta oo uu qaato mushahar fiican oo maamule ahaan ah. Halkii uu ka isticmaali lahaa gawaarida jilicsan oo mushaharkiisu iibsan karo, wuxuu doorbidi lahaa gaadiidka dadweynaha in ay door bidaan basas.
Sida laga soo xigtay warbixinnada, Wilder wuxuu mararka qaar adeegsadaa boosteejada basaska ee loo yaqaan 'Ecclesall Road Bus' oo u dhow gurigiisa, oo ah calaamad muujineysa inuu hoos ugu dhacay dabiicadda dhulka. Isaga, shaki la'aan, waa daawo ka hortagga nolosha qaaliga ah.
Chris Wilder Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Wuxuu mar ahaa arday u ahaa Sir Alex Ferguson: Ma ogeyd?… Chris Wilder inta lagu gudajiray waayihiisii ​​maamul ee hore wuxuu arday u ahaa halyeeygii hore ee kooxda Manchester United Sir Alex Ferguson.
Chris Wilder iyo Alex Ferguson- Macallinkiisa. Sumcada Sawirka: SUFC
Intii lagu jiray waqtigiisii ​​Alfreton Town iyo Oxford, Wilder wuxuu inta badan u safri lahaa Manchester si uu u arko maamulaha Legendary-ka ee casharrada ka bixiya. Isaga oo ka hadlaya khibradda, ayuu mar ku yidhi ereyadiisa;
Waqti ayuu qaatay inuu i caawiyo intaan jidka ku jiray. Wuxuu u qaban jiray dhowr maamulayaal dhalinyaro ah oo Ingiriis ah, aniga maahan. Stuff sidaas oo kale ah ayaa i siiyay dhiirrigelin ballaaran.
Wuxuu hal mar wacay ka hor ciyaartii iigu dambeysay ee is-reeb-reebka ahayd ee Oxford [oo aan ka horjeeday York ee 2010] wuxuuna u gudbiyay dhowr talooyin ah oo iga caawiyay inaan guuleysto. ”
Diinta: Chris Wilder sida qoysaska badan ee Liverpool ayaa la rumeysan yahay inay ka soo jeedaan qoys qoys oo Masiixi ah. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan ama calaamado yar oo muujinaya inuu ku xidhan yahay diinta.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhrinta sheekada Chris Wilder Childhood Story iyo Xaqiiqda Taariikh nololeedka ee Untold. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Steven Gerrard Storyhood Sheeko Xogta Warka Xogta Leh
Frank Lampard Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'